ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထွက်ပေါ်နေသည့် သတင်းများကို အနိုင်ရ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိ - Yangon Media Group
ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထွက်ပေါ်နေသည့် သတင်းများကို အနိုင်ရ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိ
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄
ကြား ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီကိုယ်စားလှယ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ထွက်ပေါ်နေသည့် သတင်းများကို အနိုင်ရပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ်က ရွေးကောက်ပွဲပြီး ၄၅ ရက် ကျော်လျှင် အားလုံးကိုရှင်းလင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
၂ဝ၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြိုင်ဘက်ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ဖြတ်ကျော်အနိုင် ရရှိခဲ့သည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးနေမျိုးအောင်သည် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် နှစ်လအလိုက ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ ဆိပ်ကမ်းမြို့ နယ်ရှိဒေသခံများကို ချေးငွေရရှိ ရန် ဆက်သွယ်ပေးခဲ့ကြောင်း Myanmar Now သတင်းဌာနက နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်က ဖော်ပြခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းသတင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးနေမျိုးအောင်က ”လောလော ဆယ် ကျွန်တော်တို့ဘဝလေးကို နားလည်ပေးပါ။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အချိန်အတောအတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့သည် မောင်ရင် လောင်းတစ်ယောက်လိုနေရပါတယ်။ စားသတိ၊ သွားသတိ၊ နေသတိ၊ အိပ်သတိ၊ ထိုင်သတိ၊ အ မြင့်မတက်နဲ့ရေမကူးနဲ့ ဟိုမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့သတိထားခြင်းပေါင်းများစွာနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၄ ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ ၄၅ ရက်အတွင်းမှာတော့ မီးနေသည် တစ်ယောက်လိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့က မီးတွင်းထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ဒါလည်းပဲ ကျွန်တော်တို့ သွားသတိ၊ လာသတိ၊ စားသတိ၊ ပြောသတိ ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ ကျွန်တော်တို့နေရပါတယ်။ မီးထွက်တဲ့အချိန်ကျရင် တော့ ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ခင်ဗျ” ဟု နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်က ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
အဆိုပါကိစ္စအပေါ် မှတ်ချက်တောင်းခံရန် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါ တီ၏ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ထံ အကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ် သော်လည်း ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ပြောခွင့်ရ ဦးသိန်းထွန်းဦးကမူ ခရီးသွား နေသဖြင့် နောက်မှပြန်လည်ဆက် သွယ်ရန် ဖြေကြားခဲ့သည်။ ”ကျွန်တော် နေပြည်တော်ကို သွားတဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်ရောက် နေတယ်။ အဲဒီဘက်ကအသံကို မကြားရဘူး။ နောက်မှပြန်ဆက်ပါ” ဟု ပြောသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည့် ဒီချုပ်ပါတီကိုယ်စား လှယ် ဦးသန်းထိုက်အောင်အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ၎င်းအနေ ဖြင့် မဖြေကြားနိုင်သေးကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လစ်လပ်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ၅၁၅ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြိုင် ဘက်ဒီချုပ်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းဖြစ်သည့် ဦးသန်းထိုက် အောင်က ၃၅၆မဲသာ ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ကျပ် (၁၄)ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ??
သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကို CNN တရားစွဲမည်
မြဝတီမှ ထုတ်လွှတ်သည့် လျှပ်စစ်နှင့် ထိုင်းမှဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးသည့် လျှပ်စစ်မီးတို့၏ အားနည်းချ?
တီးတိန်ဒေသထွက် သဘာဝရွှေဖီ-ရွက်သစ် လက်ဖက်ခြောက်များ ကလေးမြို့ဈေးကွက်သို့ ပိဿာချိန်ထောင်ချ?
ပွဲပန်းလာမည့် လက်ရွေးစင် ကစားသမားများကြောင့် အသင်းရလဒ် ထိခိုက်မည့် အပေါ် ရီးရဲလ်နည်းပြ ဇီဒ??
မြို့သစ်မြို့တွင်း ကတ္တရာထပ် ပိုးလွှာခင်းခြင်း၊ လမ်းတိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ပလက်ဖောင်း တည်ဆောက်?
ဘုရားသခင်က ဒေါ်နယ်ထရန့်ကို သမ္မတဖြစ်စေချင်ခဲ့ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်ပြောခွင့်ရ ဆို
ကျောက်စိမ်း၊ ရွှေ၊ ပယင်း ထွက်ရှိသောဒေသဖြစ်သည့် ခန္တီးမြို့၌ ယာယီကျောက်မျက်ဈေး စတင်ဖွင့်လှ??
နှစ် ၁၆ဝ ပြည့် လန်ဒန် ဘစ်ဘင်နာရီစင်ကြီး အစဉ်အလာမပျက် ၁၂ ချက်တီးခတ်ကာ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုမည်
ရှားလော့ဟုမ်း(၃) ရုပ်ရှင် ၂ဝ၂ဝ တွင် ရုံတင်မည်